Nye otu nkwụsị nke sistemụ mgbidi nkebi site na 2004.
Ihe ngbanye ulo
Ighalo ogwe nkebi
Nkebi motali Glass
Ihe Ngwọta Oghere Ahụ Dị Mkpa
Ihe karịrị afọ 15 nke ahụmahụ na mpịakọta na
Mpaghara Mpaghara Mpaghara na-enyefe na mgbidi.
Ebumnuche anyị bụ imeju ezigbo ndị ahịa nwere ezigbo nhazi ma nwee ezi obi iru ala ma nwee ntụkwasị obi na ngwa anyị na ngwa ha. Ha nwere ọtụtụ atụmatụ na-ewu ewu na ngwa.
Hazie ihe ngwọta maka windowsill / ogbo na njedebe nke ndị na-ere mgbidi sitere na China
Otu esi eme njikọ zuru oke na bọlbụ akara ma ọ bụrụ na window dị na njedebe nke mgbidi ahụ, ụzọ na-enye gị ụzọ ga-agbanwe!Onye na-emepụta na onye na-eweta: Rootfold MgbidiBootfold Dozie ihe ngwọta maka windowsill / ogbo na njedebe nke ndị na-ere mgbidi si China
Doorfold Slides Glass Partition Office ngwa ngwa ida mbido
Doorfoll na-enye ndị ahịa na-eme ka usoro sistemụ na-eme ka mmiri na-eme njem na mbara igwe dị iche iche maka ọrụ ọfịs, kpọtụrụ anyị maka otu nkwụsị& nseta okwu.
Ọkachamara ndị ọkachamara dị iche iche
Etslọ ọrụ ọkachamara dị iche iche dị iche icheTypedị nke Ogwe: akwa / akwa / akwa, HPL, MDF / Melemine, iko osisi, onye na-acha ọcha, wdg card.Onye na-emepụta na onye na-eweta: Rootfold MgbidiIsi : Ndị nwere ahụmahụ na ọkachamara na nke ogo dị elu na Nnukwu mkpuchi dị elu na-ebugharị sistemụ mgbidi na China 6.Ma ozi biko kpọtụrụ: Mr.wen Allen (Onye nwe ya na injinia)Doorfolld Press Ntọala dị iche iche site na Rootfoldrlọ Ọrụ Mmụta Nsonaazụ - Livold
ihe ndozi ogwe osisi na-enweghị ihe ndozi maka ọfịs
Mpaghara nke na-enweghị atụ na-agbada na mgbidi. Ngwaahịa a nwere oke ikuku nke gas na-emerụ ahụ n'ime gburugburu ebe obibi. Ọ nwere ike rụọ ọrụ dị mkpa na ibelata oche oche carbon. A na-eji ngwa ọrụ na akụrụngwa emepụta ihe ọhụrụ& Styles. Ngwaahịa ahụ enweghị ihe ndị na-egbu egbu dịka Mercury na ọla ndị ọzọ dị ize ndụ maka gburugburu ebe obibi. Ọ nwere naanị ahịhịa kemịkalụ nke na-akpata agba ya, nke na-adịghị emerụ ndị ọrụ na gburugburu ebe.
Haziri ahaziri emechi emechi
OmenaalaAcoustic paneL na Mgbidi Mpaghara nkebi, anyị ga-eje ije gị site na usoro ekere òkè, site na nkwukọrịta tupu ịdetụ aha tupu ị ga-eme, mepụta, mbufe na nwụnye.
Anyị na-enye sd na 3d imewe. Anyị na-arụ ụdị atọ nke QC iji hụ na ogo ngwaahịa.
Anyị na-agbaso usoro iwu maka usoro nkwalite siri ike, na-echekwa oge ma na-eri gị uru ma wepụta gị uru kachasị.
Anyị na-anabata gị nke ọma ileta ụlọ ọrụ anyị iji mụta banyere anyị Acoustic panel na Mgbidi nkebi Imepụta na ụdị mmepụta.
Onye njikwa ọrụ e kenyere anyị ga-eduzi ma debe ọrụ ahụ ma na-agba ọsọ ma na-agba ọsọ site na iji kọwaa akụ achọrọ, ịhazigharị na ịkpọtụrụ gị na nnọchi nkwekọrịta izu ụka;
Anyị ga-enyocha mmefu ego, atụmatụ, na eserese, ma na-eduzi nleta saịtị& Nyocha iji kpebie oke na mkpa nke ọrụ ahụ iji kọwaa ụzọ kachasị mma;
Onye njikwa ọrụ ọrụ e kenyere anyị ga-eduzi ma debe oru a ma na-agba ọsọ ma site na iji kọwaa akụ achọrọ, nhazi.
A na-emikpukọ ụwa nke ngwaahịa ndị ahịa anyị kpamkpam. Mana anyị anaghị eso sook na njirimara mpaghara; Anyị na-echekwa n'ụzọ dị ka: "Gịnị na-eme ndị ahịa ahịa ndị ahịa anyị nwere obi ụtọ?" "Kedụ ka anyị ga - esi kpalie ọchịchọ ịzụta ihe?" Nke a bụ ihe anyị ga - eme gị. Nke a bụ otu anyị si agbanye ọrụ gị n'ọrụ anyị.
Mụta maka ngwaahịa ndị anyị mere maka gị, dị kampịachi mgbidi nkebi naMkpokọta Mkpokọta Ekwentị, wdg, ị ga-enwekwa nchekwube anyị.
Ulo nke abuo nke Heritage nke Dammam Saudi Arabia
Okwu ndị metụtara ya
ANlọ ọrụ TIANYUAN (XIAMEN) -GRAND BANQUET HALL (P1 & P2)
Uqchụ ntụrụndụ Yonghong Hotspring
Doorfold bụ ụlọ ọrụ na-akwụ ọtụtụ nlebara anya na ogo ngwaahịa. Site na nhọrọ akụrụngwa, chepụta, iji mezue ngwugwu, anyị na-arụ ọrụ dị mma mgbe ị na-agbaso usoro mmepụta mba.
Nke anyiMgbidi nkebiA na-ekwupụta ngwaahịa iji guzogide ule nke oge ma na-ewu ewu n'etiti ndị ahịa bụ ndị nwe ụlọ ọrụ kpakpando, ụlọ ọrụ ama ama na ihe ndị ọzọ. Ruo ugbu a, anyị agafeela asambodo dị na ụwa 9001.
Ihe karịrị afọ 15 nke ahụmahụ na mpịakọta ma na-agbada mgbidi na ụlọ ọrụ mgbidi na-ebugharị,Ogwe omenala, Doompolld na-enwekwa ahụmịhe bara ụba na nka iji nye ndị ahịa ngwaahịa dị mma ma hụ na ndị ahịa na-anata ọrụ kachasị mma iji zute ihe ndị kacha mma.
A na-anabata gị ileta ụlọ ọrụ anyị ma ọ bụ zigara anyị ajụjụ banyere ọnụahịa dị kampịachi mgbidi nkebina mgbidi ekwenti n'oge ọ bụla.